version 0.5.4 – မြန်ပြင်ဆင်ခြင်း
ဇွန်လ 14, 2010 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု2comments
ရက်အနည်းငယ်လွန်ခဲ့တဲ့ကျနော်တို့တိတ်တဆိတ်ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ 0.5.4 ရှာဖွေတွေ့ရှိအနည်းငယ် bug တွေကြောင့် fixed သော 0.5.3, အဓိကအားဖြင့် url ဘာသာပြန်ချက်နှင့်အတူအေဂျက်နှင့်အချို့အစွန်းအမှုများနှင့်အတူ. အရင်ဗားရှင်းသင့်အဘို့အ ok အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်, မြှင့်တင်ရန်မလိုအပ်တကယ်ရှိပါတယ်.
သို့သော် – မှတ်စုယူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ trac အပေါ်ဖွင့်လှစ် bug တွေကြောင့် (trac.transposh.org) ကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းရန်တတ်နိုင်သောသူများဖြစ်ကြ၏.
အောက်တွင်တင်သွင်း: အထွေထွေမက်ဆေ့ခ်ျများ အတူ Tagged: bugfixes ပြင်ဆင်မှုများ, အသေးအဖွဲ, လွှတ်ပေး
ဇူလိုင်လ 24, 2010 တွင် 8:27 နံနက်
အမှားနားမလည်: syntax ကိုအမှား, မမျှော်လင့်ဘဲ T_STRING, မျှော်လင့် T_OLD_FUNCTION သို့မဟုတ် T_FUNCTION သို့မဟုတ် T_VAR သို့မဟုတ် '}’ in /homez.143/paulet/www/wp-content/plugins/transposh-translation-filter-for-wordpress/transposh.php on line 56.
ဇူလိုင်လ 28, 2010 တွင် 10:41 ညနေ
Transposh-wordpress အတွက် Changeset [c77d808]: Will it work now? ဇူလိုင်လ 21, 2018
Transposh-wordpress အတွက် Changeset [200b2fe]: Debugging the update stuff takes its toll ဇူလိုင်လ 21, 2018
Transposh-wordpress အတွက် Changeset [61dccaf]: Not hiding from wordpress, but we should not hide from ourselves ဇူလိုင်လ 21, 2018
Transposh-wordpress အတွက် Changeset [ffe7e28]: v1.0.2 release is imminent ဇူလိုင်လ 20, 2018
Transposh-wordpress အတွက် Changeset [4deacb5]: Updated POT file, finally ဇူလိုင်လ 19, 2018